Man kungokwalabo kwezilwane. Nokho, kuyinto ehlukile kakhulu wonke amanye amalungu zezwe isilwane. I emvelweni mbhoshongo Homo sapiens ithatha esigabeni esiphezulu. The main umehluko phakathi abantu ezilwaneni ukuthi indoda ngosizo amathuluzi akhethekile ungaguqula imvelo, ukulungisa futhi uzivumelanise nezidingo zabo. Yikuphi ekilasini le ndoda? Lokhu kanye nezinye izinto, kuzoxoxwa ngakho kulesi sihloko.
isikhundla somuntu emhlabeni isilwane. Ukuze lokho ekilasini umuntu ahlala
Ezweni isilwane simiso Homo sapiens has ukuxhunywa:
• Uhlobo - chordates;
• lamabutho - wezinkawu;
• subtype - ezilwaneni ezinomgogodla.
Ezinye izici, ezifana nokuba khona izingxenye ezinhlanu yomgogodla, umjuluko nezindlala sebaceous, esinegazi elifudumele, ezine-chambered senhliziyo, nezinye, ukuphendula umbuzo ngokuqondene nokuthi imiphi ikilasi nocabangelayo. Zonke lezi zici enze kube nokwenzeka ukuba zihlanganisa Homo sapiens ukuze isigaba ezincelisayo.
Lezo zici umuntu njengoba ukuzalwa e Izitho zokuzala kukamama futhi ingane ngokusebenzisa ukudla placenta izimpawu okungokwendlela subclass esinomhlapho womuntu.
izici ezivamile futhi esasenza Homo sapiens nezinye amalungu esigaba ezincelisayo
Sesivele esiphethweni ukuthi ikilasi abantu. Yiziphi izici abazaba isigaba kwezilwane, futhi lapho zihlukile? Ezinye izici ezifanayo ziye ezichazwe esigabeni sangaphambilini. Ngaphezu kwalokho, umuntu kanye nabanye abameleli lesi sigaba, feeds inzalo ubisi lwakhe obelusanda kuzalwa.
Nokho, nakuba le Ukuklanywa komzimba womuntu futhi ine eziningi ezifanayo ne isakhiwo ezincelisayo, unezindaba umehluko. Okokuqala, it is ukuhamba uqotho. Kuphela Homo sapiens inesimiso ezinjalo. Ngenxa yalokhu, i-lwamathambo omuntu has ezine ukugoba umgogodla, unyawo arched nasesifubeni flat. Ngaphezu kwalokho, abantu bahlukile kwezinye izilwane ezincelisayo predominance neurocranium phezu ebusweni. Consciousness futhi ukucabanga, ikhono lokukhulumisana ngokusebenzisa inkulumo - lezi zici, kanye nazo zonke ezinye, ihlukanisa indoda kusukela yezilwane, ayise kuye esiteji eliphakeme yentuthuko.
womuntu Ikakhulukazi futhi isilwane
Ukuze lokho ekilasini kwezilwane umuntu ahlala kulo, thina usuyitholile kakade. Yini izilwane ohlakaniphe kakhulu? Lokhu monkey, cephalopods, izilwane zasemanzini ezincelisayo, igundane. Kuye kungase kutholakale ukuthi abe uhlobo lwenkawu olungavamile babe nomuzwa wobulungisa, kanye amadoda, futhi ngisho esithambekele kukho sokukhathalela. Complexly Ezinye izilwane, ezifana izinja noma amakati, trainable. Nokho, kungakhathaliseki ukuthi ezihlakaniphile futhi abakwaziyo kungenzeka amanye amalungu kwezilwane, abasoze adlula ingqondo zabantu.
Sesikubonile kakade waphendula lo mbuzo: "? Yiliphi ekilasini umuntu", Futhi ezikhonjwe uhlobo yayo, subtype, futhi ihlukane we subclass. Manje sizogxila ubudlelwano phakathi Homo sapiens kanye nabamele jikelele silwane. Man Okokuthola nomzingeli isihloko. He phanga nga inyama yezilwane ezifile. Ngaphezu kwalokho, kungase kube nezilwane ezenza kube impahla yabantu. izinyoni ezifuywayo zisetshenziselwa ukuhlangabezana nezidingo womuntu, hhayi kuphela ekudleni. Nge bezilwane ezifuywayo abantu ukuvikela impahla yabo, ithwala esindayo umsebenzi ensimini, ivikela imikhiqizo namagundane, athwala ezihlukahlukene izinto, njalo njalo. D. izilwane noboya yabo isikhumba umuntu othola impahla eluhlaza ukwenziwa izingubo nezicathulo. Lezi ezifuywayo like amakati nezinja, abantu badinga ukuxhumana, ukuzijabulisa nokuzilibazisa. E. Ubudlelwano obuphakathi Homo sapiens nezilwane liseduze kakhulu futhi enezici.
Manor Rastorguev-Kharitonov, Ekaterinburg: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
EChernobyl izisulu. Izinga inhlekelele
Izinkinga ezithinta imvelo besikhathi sethu
Osikilidi-Cuban: ikhwalithi ezihlukahlukene
Chelyabinsk GRES: umlando, sesimanje
Okuzenzakalelayo ukuhlanza cache yesiphequluli
Kanjani ukuba uthole abakhulelwe ungathathi izinyathelo zokuphepha - izinganekwane eqinisweni.
Ifoni "Motorola C350": izici, izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela ukuhlukanisa papillomas nezimvukuzane? Izimbangela futhi ukwelashwa
Indlela ukushintsha kule "-Google Chrome" ikhasi isiqalo. Ukufundiswa Wabasaqalayo
Chernokolgotochnik Tsyuman Yuri Leonidovich: Biography
Umdlali wasemuva Mouse: ukubuyekezwa, izincazelo, onobuhle, ukubuyekezwa
"Interskol" (compressor) Ukucaciswa nezici
Speedometer akusebenzi ku 2110: yini okufanele uyenze?
Ukudoba Secrets: abicah lolo
Indlela ukupheka kebabs e emhlophe juice: zokupheka